नेवाडा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट, अटर्नी र लागत
नेभाडा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट के हो?
नेवाडा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्टहरू स्वयं-बसेको खर्च व्यर्थ ट्रस्टहरू हुन्। यसको मतलब यो छ कि तपाईं एक भरोसा व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ र सम्पत्तिहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त तपाईले दुबै गर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यका लेनदार वा मुद्दाबाट सुरक्षा लिन सक्नुहुन्छ। एकपटक तपाईंले नेवादा संरक्षण ट्रस्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुभयो, दुई वर्ष बितिसकेपछि, विश्वासले तपाईंको सम्पत्ति लेनदारहरूबाट जोगाउँछ। यदि तपाईं ट्रस्टमा सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रकाशित गर्नुहुन्छ भने, नेवाडा अखबारमा, उदाहरणका लागि, यसले त्यो समयसीमा छ महिनामा कम गर्दछ। यसैले, सीमाहरूको विधान समाप्त भएपछि, ट्रस्टले तपाईंको सम्पत्ति भित्र लक गर्दछ। यसैले, तपाइँको लेनदारहरू एक निर्णय पूरा गर्न तिनीहरूमा पुग्न सक्दैन।
विश्वास ग्राहकहरूका लागि त्यहाँ धेरै सीमितताहरू छन्; जब सम्म तपाईंले ज्ञात लेनदारहरूलाई ठग्ने विश्वासको स्थापना गर्नुभएन र तपाईं सरल अपरेटिंग औपचारिकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ, नेभाडाको सुरक्षात्मक कानूनले तपाईंलाई सम्मानजनक सम्पत्ति सुरक्षा लाभ प्रदान गर्न सक्छ। कम्तिमा एक ट्रस्टी नेभाडा निवासी हुनु पर्छ जो ट्रस्ट रेकर्डहरू राख्न, कर आवश्यकताहरू फाइल गर्नका लागि जिम्मेवार छ। नेभाडामा कसैले मुख्य रूपमा ट्रस्ट प्रशासनको आवश्यक छ। नेभाडा राज्यमा कोही ट्रस्ट को प्राथमिक प्रशासक हुनु पर्छ।
सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्टहरू
निगम र LLCs
बैंक खाता स्थापना
व्यवसाय क्रेडिट कार्यक्रम
हामी धेरै नेवाडा प्रस्ताव गर्दछौं
सेवाहरू साथै निःशुल्क पनि
धन सुरक्षा र पर्याप्त नियन्त्रण
ट्रस्ट व्यवस्थितकर्ताहरू (तपाईं) को ट्रस्ट गतिविधिमा पर्याप्त नियन्त्रण (शक्ति) हुन्छ, विशेष गरी कसरी ट्रस्टीले लाभार्थीहरूलाई भरोसा गर्न वितरण गर्दछ। तपाईं एक ट्रस्टीलाई सीधा आदेश दिन सक्नुहुन्न ट्रस्ट सेटलरलाई नियमित भुक्तानी गर्न। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, न्यायाधीशले तपाईंको कानुनी शत्रुहरूलाई निर्देशित गर्न शक्ति प्रयोग गर्न बाध्य तुल्याउन सक्छ। तपाईं, यद्यपि, अनुरोधहरू वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईंसँग अन्य ट्रस्ट हितग्राहीहरूलाई वितरणमा भेटो पावर हुन सक्छ। यो एक ट्रस्ट बसोबास गर्नेलाई सम्पत्ति वितरणको समयमा ड्राइभरको सिटमा रहन अनुमति दिन्छ। तपाइँसँग हतियार-लम्बाई क्षमता छ आफैमा समय र वितरणको मात्रालाई असर गर्न।
यी कानूनहरूमा निर्मित अर्को शान्ति सुविधा भनेको ट्रस्ट बसोबास गर्नेलाई “लगानी ट्रस्टको” रूपमा सेवा गर्ने क्षमता हो। त्यस्तै रूपमा, तपाईं एकतरफा ट्रस्ट सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन र लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को सुविधा तपाईंको नेभाडा ट्रस्टी हटाउन र प्रतिस्थापन शक्ति हो। अन्तमा, तपाईं स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ कि ट्रस्टले सम्पत्तिहरू कसरी वितरण गर्दछ जब सेटलर बित्छ जसलाई हामी "अपोइन्टमेन्टको शक्ति" भन्छौं।
सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट अखाडा अमेरिकामा एकदम नयाँ छ र केवल केही राज्यहरूले सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्ट कानून बनाएको छ। विशेषज्ञहरूले लामो समयदेखि नेभाडालाई अनुकूल निगम र LLC कानूनको साथ व्यवसायमैत्री क्षेत्राधिकारको रूपमा चिनिन्छन्। अदालतहरू जो कर्पोरेट पर्दा समर्थन गर्दछन्। अब, नेवाडा एक सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्ट मिलाउनको लागि रोजाईको घरेलु क्षेत्राधिकारको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो केस कानून विकसित हुनुभन्दा केही वर्ष अघि हुनेछ। यद्यपि नेभाडा कानूनहरू उचित ढ established्गले स्थापित र सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्टलाई प्रदान गरिएको संरक्षणमा स्पष्ट छन्।
यो भनिएको छ कि नेवाडा एक घरेलू सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट बनाउन र बनाए रखने को लागी सबै भन्दा राम्रो कानूनी रूपरेखा प्रदान गर्दछ। 2010 मा नेभाडा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्टले फोर्ब्स म्यागजिनले A + रेटिंग प्राप्त गर्यो, जुन देशको सर्वश्रेष्ठ हो र 13 बाट A + स्कोर गर्ने एक मात्र राज्य हो।
राज्य आय कर छैन
कुनै राज्य कर्पोरेट करहरू छैन
सम्पत्ति हस्तान्तरण (2 बर्ष) मा सीमितताको सब भन्दा सानो विधान, जुन सही ढ implemented्गले कार्यान्वयन गरियो भने6महिना जति छोटो हुन सक्छ।
सबै लेनदारहरूलाई भरोसा सम्पत्तिहरू पहुँच गर्नबाट प्रतिबन्धित गरिएको छ, गुनासो, बच्चा समर्थन, फैसला, आदि।
उच्चतम मानक मानक; सम्पत्तिहरूको स्थानान्तरणलाई चुनौती दिइरहेका कुनै लेनदारले धोखाधडी गर्ने अभिप्रायको स्पष्ट र विश्वस्त प्रमाण प्रदान गर्नुपर्दछ
घरेलु सम्पत्ति संरक्षण
कृपया ध्यानमा राख्नुहोस्, नेभाडा सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट मुख्यत: नेभाडा निवासीहरूको लागि नेभाडामा आधारित सम्पत्तिहरू हुन्। यदि कानून बसोबास गर्ने राज्य अर्को राज्यमा बस्दछ भने केस कानून धेरै अनुकूल देखिदैन। हामीले न्यायाधीशले भनेका थियौं, “नेवाडामा यी नियमहरू छन् भने मलाई फरक पर्दैन। हामीसँग यहाँ क्यालिफोर्निया, न्यु योर्क, इत्यादि छैन। त्यसैले म ट्रस्टीलाई सम्पत्ति खोल्ने आदेश दिन्छु।
त्यसोभए गैर-नेभाडाका बासिन्दाहरूको लागि समाधान के हो? ठिक छ, हाम्रो संगठनसँग देशको एकमात्र "ट्रिगर ट्रस्ट" छ। यो ट्रस्ट एक घरेलु, अमेरिकामा आधारित सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट हो जबसम्म कानुनी समस्याले हिर्काउँदैन। त्यसो भए ट्रस्टीहरूले भाग्ने धारालाई ट्रिगर गर्ने र विश्वासलाई विश्वको सब भन्दा बलियो सम्पत्ति सुरक्षा उपकरणमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्दछ।… कुक टापुहरूको विश्वास। हाम्रो इजाजतपत्र प्राप्त, बोन्डेड, कुक टापु कानून कानून ट्रस्टीको रूपमा चरणहरू भन्दा। नेभाडा ट्रस्टीले अमेरिकी अदालतको आदेशलाई समेट्नु पर्छ। एक विदेशी ट्रस्टीको साथ, अर्कोतर्फ, तिनीहरूले एक विदेशी अदालतको आदेश पालन गर्न आवश्यक छैन, र विश्वास कानूनी शत्रुलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न इन्कार गर्न सक्दछ।
एटर्नी र ट्रस्ट कम्पनीहरूले नेभाडा ट्रस्टहरू स्थापना गर्छन्। तपाईं माथिको नम्बर मध्ये एक कल गर्न र हाम्रो विशेषज्ञ परामर्शदाताहरु बाट प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न र तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिन मद्दत गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाई नि: शुल्क परामर्श फारमहरू मध्ये एक पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एक वकिलले एक विश्वास ड्राफ्ट गर्न सक्दछ जुन तपाईंको आवश्यकताको लागि टेलरमेड हो।
तपाईंको सम्पत्ति संरक्षण योजना को विविधीकरण गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग पहिले नै सम्पत्ति संरक्षण योजना छ भने, नेभाडा ट्रस्ट, वा अझ राम्रो, ट्रिगर ट्रस्ट, तपाईंको रणनीतिमा विविधता प्रदान गर्दछ। विश्वमा शीर्ष सम्पत्ति सुरक्षा कानून फर्महरूले बहु सम्पत्ति सुरक्षा सवारी साधन र बहु ​​सम्पत्ति सुरक्षा अधिकार क्षेत्रमा तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षा चारैतिर फैलाउन सिफारिश गर्दछ। यसले तपाईंको कानुनी प्रतिद्वन्द्वीलाई धेरै मोर्चामा लडाई गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, तपाईंको सम्पत्तीलाई पछ्याउने कानूनी लागतहरूमा ठूलो खर्च थप्न। नेभाडा ट्रस्ट वा ट्रिगर ट्रस्टले कुनै पनि सम्पत्ति सुरक्षा योजना, अपतटीय वा घरेलु प्रशंसा गर्न सक्छ।
आज नेभाडा व्यापार सेवा पेशेवरसँग बोल्नुहोस्, सामान्य व्यापार घण्टाको अवधिमा नि: शुल्क परामर्श, कल 1-888-444-4412